The mobile Zimbabwe - Olbios
Mobile Community Zimbabwe (MCZ) is a project that gives ambitious young Zimbabweans a voice and a platform to share and exchange information through mobile telephony, video and social media. Using an application called StoryMaker, the MCZ project equips young Zimbabweans from across the country with skills to use mobile phones to tell effective stories about themselves and their communities. The project also builds the capacity of participants to use high technology devices and applications that enable the development and editing of short mobile videos.
MCZ hopes to contribute to plurality and diversity of news and informational content in and from Zimbabwe by promoting citizen journalism as a tool to empower young Zimbabweans to have a voice while enabling uncensored information on and from different localities in the country.
Citizen journalism as an alternative storytelling practice is fast becoming popular in Zimbabwe. Mobile Community Zimbabwe offers high quality practical skills training in citizen journalism and digital literacy, equipping young Zimbabweans from across the country with skills to use mobile devices to tell compelling stories about themselves and their communities.